ebudhabar.com – Different taste of news, views & analysis.
२३ असार, काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा आज पुनः मतदान हुने भएको छ । बुढीगंगामा वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान रद्द भएको थियो । बुढीगंगा नगरपालिकामा १० वटा बुथमा १९ वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ । निर्वाचनलाई मर्यादित रुपमा सम्पन्न गर्न प्रारम्भिक व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत […]
२२ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितको टोलीले मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो । निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ […]
२२ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोपबारे छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष समिति बनाए लगतै शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । लगतै विशेष समय लिएर बोलेका अर्थमन्त्री शर्माले छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्दै राजीनामा घोषणा गरे । […]
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बिशेष
उदयपुरको त्रियुगा-१० मा गोलप्रथा गर्दा एमालेका किरण विजयी
काठमाडौं-१३ मा एमालेको प्यानलै विजयी
अझै ४ पालिकाको मतपरिणाम आउन बाँकी
काठमाडौं महानगरको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलको जित निश्चत
सबै समाचार →
एमालेले सातै प्रदेशमा पार्टी अनुशासनबारे प्रशिक्षण दिने
तीन महिना सडक नखन्न सरकारको निर्देशन
२२ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादु
महाधिवेशनले पार्टीमा पुनर्जागरण ल्याउने छ - योगेश भट्टराई, संयोजक, प्रचार समिति
नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनको सन्मुखमा हुनुहुन्छ । तयारी के–के भैरहेको छ ? नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि मंसिर १०...
एमालेले बनायो ३ वटा नयाँ विभाग
१९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले तीनवटा नयाँ विभाग गठ गरेको छ । आइतबार बसेको सचिवालय...
एमालेका १३ विभागीय सचिव मनोनयन
१९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विभिन्न केन्द्रीय विभागका सचिवहरू मनोनयन गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको...
चुनावी अन्तरघात छानविन गर्न एमालेले बनायो समिति
१९ असार, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल रण्नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुशासनहीनता र अराजकताले...
प्यूठानमा चट्याङ लागेर दुई बालकको मृत्यु, १० घाइते
देशका धेरै स्थानमा बर्षाको सम्भावना
प्रचण्डले पार्टी एकताको चरम दुरुपयोग गरे : ओली
वामपन्थी एकता तत्काल असम्भव : योगेश भट्टराई
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद १ अर्ब ७२ करोड ३०...
पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन
१० असार, काठमाडौं । संसदीय समितिले पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग तथा बाणिज्य र...
११ महिनामा १५ खर्ब ७७ अर्बको व्यापार घाटा
७ असार, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा नेपालले करिब १६ खर्बको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।...
६ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धी गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल...
मुलुकको चालू खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्बमाथि पुग्यो
२७ जेठ, काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकको चालू खाता घाटा बढेर ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड पुगेको...
२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बर्षायाममा सडक खन्न रोक लगाएको छ । आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि ११ महिना काम नगर्ने...
ती दिन सबै
प्रचण्डलाई घनश्यामको जवाफ : माओवादीको बिउ अब चल्दैन
रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन
मूल्यवृद्धिबारे एमालेले माग्यो मन्त्रीको जवाफ, सभामुखले गरे रुलिङ
एमालेले ४ सय ४५ जना जनप्रतिनिधिलाई के विषयमा प्रशिक्षण दिदैछ ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको धु्रवीकरण अब प्रदेशहरुमा पनि ठोस र मूर्त रुपले प्रतिविम्बित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय, कर्णाली...
सात दिन सबै
आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा : आज अन्तिम सुनुवाइ हुँदै
स्रष्टा र सिर्जना सबै
काठमाडौं । विश्व संस्कृत दिवसको अवसर पारेर ‘संस्कृत: पूर्वीय संस्कृतिको स्रोत’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको...
नयाँ पुस्तक सबै
६ असार, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा अब दुई थरी मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ ।...
एमसीसी स्वीकार्न अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कुटनीति’ शुरु गरेको छ, प्रतिरोध गर्छौ : चीन
६ फागुन,काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लिएर नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा मात्र विवाद बढेको...
- सीमा आभास
मैले प्रथमपटक टेकेको माटोबाट लखेटिँए मैले प्रथमपटक हेरेको अनुहारबाट लेखेटिँए मलाई प्रथमपटक समातेका हातहरुबाट लखेटिँए लखेटिँदा–लखेटिँदै आफू आफैबाट लखेटिँए ।...
... र यो पनि ... सबै
पहिरोले बेनी-मालढुंगा सडकखण्ड अवरुद्ध
टेक्सासमा लरीभित्र भेटियो ४२ जनाको शव
अफगानिस्तानमा ६.१ म्याग्निच्युटको भूकम्प, २५० जनाको मृत्यु
भारत गौरव पर्यटक रेल बिहीबार जनकपुरधाम आउने